कसरी तपाइँको वर्डप्रेस साइटलाई नयाँ डोमेनमा ट्रान्सफर गर्ने Martech Zone
जब तपाइँ तपाइँको WordPress साइटलाई एक होस्टमा अपरेट गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई अर्कोमा सार्नु आवश्यक छ, यो सोच्न सजिलो छैन। WordPress का प्रत्येक उदाहरणमा elements तत्वहरू छन् ... पूर्वाधार र आईपी ​​ठेगाना यो होस्ट गरिएको छ, MySQL डेटाबेस यसले तपाईंको सामग्री समावेश गर्दछ, अपलोड भयो फाईलहरू, विषयवस्तुहरू र प्लगइनहरू, र WordPress आफ्नै।
WordPress सँग एक आयात र निर्यात संयन्त्र छ, तर यो वास्तविक सामग्रीमा प्रतिबन्धित छ। यसले लेखकको अखण्डता कायम राख्दैन, र तपाईंको विकल्पहरू सार्दैन - जुन वास्तवमै कुनै पनि स्थापनाको मुटुमा छन्। लामो कहानी छोटो ... यो एक वास्तविक पीडा हो!
प्रयोग गर्दै BlogVault, मैले मेरो स्रोत साइटमा प्लगइन लोड गरें, सूचनाहरूको लागि मेरो ईमेल ठेगाना थप गर्‍यो, र मेरो नयाँ यूआरएल र एफटीपी प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। मैले माईग्रेट क्लिक गरें ... र केहि मिनेट पछि मेरो ईनबक्समा मेरो ईमेल थियो कि साइट माईग्रेट गरिएको थियो।
मैले शाब्दिक रूपमा केहि गर्नुपर्दैन ... सबै विकल्पहरू, प्रयोगकर्ताहरू, फाइलहरू, इत्यादि नयाँ सर्वरमा सही रूपमा सारियो! तिनीहरूको अविश्वसनीय माइग्रेसन उपकरणको साथमा, BlogVault पूर्ण बैकअप सेवा हो जसले अन्य सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ:
परीक्षण पुनर्स्थापना - के तपाइँ तपाइँको साइट को पछिल्लो संस्करण मा फिर्ता गर्न को लागी चाहानुहुन्छ? तर यदि तपाइँ साँच्चिकै सहि हुनुहुन्छ भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? BlogVault ले तपाईंलाई कुनै पनि परीक्षण सर्भरहरूमा छनौट गरिएको ब्याकअप संस्करण लोड गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईं यसलाई वास्तविक वेबसाइटको रूपमा काम गरेको देख्न सक्नुहुनेछ।
अटो रिस्टोर - यदि तपाईंको वेबसाइटमा सम्झौता गरिएको छ, वा एक मानवीय त्रुटि असफलताको परिणाममा फरक पर्दैन भने, BlogVault सँधै तपाईंको साथमा हुन्छ तपाईंलाई चाँडै फिर्ता ब्याक अप गर्न चाँडै। स्वत: पुनर्स्थापना सुविधा स्वचालित रूपमा तपाईको आवश्यकताको घडीमा सर्वरमा ब्याकअप पुनर्स्थापित गर्दछ, म्यानुअल हस्तक्षेपको आवश्यकता बिना।
सुरक्षा - BlogVault ले तपाईंको वेबसाइटबाट स्वतन्त्र रहेको स्थानमा तपाईंको ब्याकअपको बहु प्रतिलिपिहरू भण्डार गरेर १००% सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दछ। तपाईंको ब्याकअप, जुन ईन्क्रिप्ट गरिएको छ, सुरक्षित डाटा केन्द्रहरूमा भण्डार गरिएको छ र साथै अमेजन एस ser सर्भरहरूमा। नियमित अमेजन एस usage प्रयोगको विपरीत, तिनीहरू साइटको अंशको रूपमा प्रमाणहरू भण्डारण गर्दैन, यसैले कुनै सम्भावित ह्याकहरू कम गर्दछ।
इतिहास - BlogVault तपाईंको backup० दिनको ब्याकअपको इतिहास कायम गर्दछ ताकि तपाईं कुनै पनि समयमा कुनै पनि समयमा तिनीहरूमा फिर्ता जान सक्नुहुन्छ।
ब्याकअप - BlogVault ब्याकअप, पुनर्स्थापना र प्रवास प्रक्रिया को लागी एक वृद्धि दृष्टिकोण अपनाउँछ। चाहे BlogVault माईग्रेट गर्दै छ, ब्याक अप गर्दै छ, वा कुनै साइट पुनर्स्थापना गर्दै, ती केवल अन्तिम सिnc्क पछि परिवर्तन भएकोमा मात्र काम गर्दछ। यसले समय र ब्यान्डविथ बचत गर्दछ।
BlogVault को लागी साइन अप गर्नुहोस्
खुलासा: हामी यसका सम्बद्ध छौं BlogVault.
टैग: Blogvaultकसरीनयाँ डोमेनमा कसरी WordPress ट्रान्सफर गर्नेकसरी WordPress लाईWordPress सार्नुहोस्WordPress लाई सार्नुहोस्WordPress ट्रान्सफर गर्नुहोस्WordPress